Mucaaradka Eritrea oo Aan ku Faraxsanayn Ogolaanshaha Itobiya, ay Ogolaatay in Girma Asmerom uu Noqdo Safiirka OAU-da Eritrea u Jooga Addis Ababa. – Rasaasa News
Jan 28, 2011 ay Ogolaatay in Girma Asmerom uu Noqdo Safiirka OAU-da Eritrea u Jooga Addis Ababa., Eritrea, ethiopia, Mucaaradka Eritrea oo Aan ku Faraxsanayn Ogolaanshaha Itobiya, news ogaden peace, onlf peace ful organisation, Somali
Safiirkii hore ee Eritrea wakiilka uga ahaan jiray ururka midowga Afrika [oau] oo uu fadhigiisu ahaa Addis Ababa, oo ay xukuumada Itobiya hore u cadaysay in ayna jeclayn sanadkii 1999, ayaa dib ugu soo laabtay caasimada Itobiya ee Addis Ababa.
Girma Asmerom Testay, ayaa warqadihii aqoonsiga ee wakiilnimo u dhiibtay madaxweynaha ururka midowga afrika [oau]Jean Ping, bishan January 17, 2011 si uu u noqdo wakiilka joogtada ah ee dalka Eritrea u fadhiya ururka miwoga Afrika.
Magacaabistiisa shakhsiyadeed kuma xidhna mucaaradka Eritrea ee uu saldhigoodu yahay Itobiya, kuwaas oo ugu cadhooday Raysal wasaaraha Itobiya in uusan diidin magacaabista Girma Asmerom Tasfay ay Eritrea u soo magacaabatay Addis Ababa.
Girma Asmeroma Tesfay waxaa uu ka mid ahaa ciyaartoyda kubada cagta ee qaranka Itobiya, waxaana uga qayb galay Itobiya ciyaarahii aduunka [olympic games] ee ka dhacay Mexico city sanadkii 1968, taas oo hadii si shakhsi ah looga hadlo uu yahay nin ka Itobiyansan Meles Zinawi.
Dhiniciisa, Raysal wasaaraha Itobiya ayaa masuul ka ah go,itaanka Eritrea oo ay sababtay xidhiidhkii dhawaa ee u dhaxeeyey isaga iyo Eritrea Afwerki, kaas oo ay Eritrea ku dhamaystirtay in ay ka go,odo Itobiya.
Girma Asmerom Tasfay wuu garanayaa Itobiya iyo reer Addis Abab, si wanaagsan, aqoonta uu u leeyahay reer Addis Ababa waxay khusayn doontaa dad ka mid ah xubnaha mucaaradka Eritrea ee jooga Addis Ababa, wuxuuna qaabayn karaa dad koox ah oo isku xidhan soona jiidan kara dadka ku nool caasimada Itobiya ee Addis Ababa.